ဇန်န၀ါရီလအတွက် မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆု (Final Result) နှင့် အရသာစုံလင် ပြိုင်ပွဲဝင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ဇန်န၀ါရီလအတွက် မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆု (Final Result) နှင့် အရသာစုံလင် ပြိုင်ပွဲဝင်
ဇန်န၀ါရီလအတွက် မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆု (Final Result) နှင့် အရသာစုံလင် ပြိုင်ပွဲဝင်
Posted by weiwei on Feb 7, 2013 in Best Web Awards, Myanmar Gazette | 111 comments
final result မန်းဂဇက်ချစ်သူများ စာပေဆု ၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီ
ကျွန်မတို့လူသားအားလုံး အာရုံ ၆ ပါးနှင့် မကင်းနိုင်ကြပါဘူး။ ကောင်းတဲ့အာရုံတွေ ခံစားချင်ကြတာလဲ လူ့သဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိဖြင့် ခံစားသိရှိနိုင်သော ရူပအရသာ၊ နားဖြင့်ခံစားနိုင်သော သောတအရသာ၊ နှာခေါင်းဖြင့် ခံစားနိုင်သော ဂန္ဓာအရသာ၊ လျှာဖြင့် ခံစားသိရှိနိုင်သော ဇိဝှာအရသာ၊ ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့် ခံစားနိုင်သော ဖောဌဗ္ဗာအရသာတို့ကို နေ့စဉ်ခံစားရင်း ရှင်သန်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။
နေ့စဉ် အသက်ရှင်ဖို့ စားသုံးနေကြသည့် အစားအသောက်များအတွက်လဲ ချို၊ ချဉ်၊ ဖန်၊ ငံ၊ စပ်၊ ခါး စသည့် အရသာမျိုးစုံကို မျှတအောင် စီမံချက်ပြုတ်ပြီး အရသာခံကာ စားသောက်ကြပါတယ်။ အများအားဖြင့် ရိုးရာအစဉ်အလာအတိုင်း ချက်ပြုတ်စားသောက်ခြင်းကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ပြင်ပအစားအစာများကို မြည်းစမ်း စားကြည့်ရင်း ကြိုက်နှစ်သက်တာရှိသလို မနှစ်သက်တာလဲ ရှိကြပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ကြိုက်တာကိုမစားရပဲ မကြိုက်တာကို ဇွတ်မှိတ်စားရတာမျိုးလဲ ရှိကြတယ်။
အိမ်ရှင်မတွေအတွက် ဟင်းတစ်ခွက်ချက်ရတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ ချက်ပြုတ်ခြင်း အနုပညာဖြင့် မိသားစုအတွက် အရသာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စိတ်စေတနာအပြည့်ဖြင့် စီမံချက်ပြုတ်ပေးကြရပါတယ်။ အခြေခံအရသာအားလုံးဟင်းတစ်ခွက်ထဲမှာ မပါနိုင်လျှင်တောင်မှ ထမင်းဝိုင်းမှာ အရသာစုံလင်အောင် ပြင်ဆင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
မြန်မာပီပီ ဆီပြန်ဟင်းလေးနဲ့မှ အရသာကောင်းသည်ဟုထင်သူလဲရှိတယ်။ ငပိရည်တို့စရာ မပါလျှင် ထမင်းမမြိန်သူများလဲရှိတယ်။ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် အသုတ်လေးနဲ့မှ ခံတွင်းတွေ့သူလဲရှိတယ်။ ချဉ်ရေဟင်းနဲ့မှ လျောကနဲထမင်းစားဝင်သူလဲရှိတယ်။ တရုတ်ဟင်းလျှာကိုစားမှ အရသာတွေ့သူလဲရှိတယ်။ ဥရောပစတိုင် ဂျုံကိုစားမှ တင်းတိမ်သူလဲရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အရသာကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ချက်ပြုတ်စားသောက်ရင်း ကျေနပ်တင်းတိမ်မှုရအောင် ကြိုးစားကြပါတယ်။
ဟင်းတစ်ခွက်ချက်လျှင် အနဲဆုံးတော့ ဆားထည့်ရပါမယ်။ ဘယ်လောက်ကြီးပဲ ကောင်းအောင်ချက်ထားပါစေ ဆားမပါလျှင် ပျက်စီးသွားပါတယ်။ ဆားပိုထည့်မိလျှင်လဲ မကောင်းတော့ပါ။ ချို ချဉ် ဖန် ငံ စပ် ခါး အရသာအားလုံး အချိုးအစား ညီညွတ်မျှတမှသာ စားလို့ကောင်းတဲ့ အရသာရှိတဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်မှာပါ။
နေ့စဉ်ပုံမှန် စားသောက်နေကျ ဟင်းလျာတွေကို တစ်ခါတစ်လေ ငြီးငွေ့စိတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အသစ်အဆန်းအရသာ တစ်ခုခုကို စားကြည့်ချင်စိတ် ဖြစ်လေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။ ကိုရီးယားဇာတ်ကားတွေကြည့်ပြီး ကိုရီးယားအစားအစာ စားချင်စိတ်တွေ၊ ဂျပန်စတိုင်စားချင်စိတ်တွေ၊ ယိုးဒယားစတိုင်၊ ပြင်သစ်စတိုင်၊ အီတလီစတိုင်၊ အိန္ဒိယစတိုင်၊ အမေရိကန်စတိုင် စသဖြင့် အသစ်အဆန်းတွေကိုလဲ စားချင်လေ့ရှိတတ်ပါတယ်။
ကျွန်မနှစ်သက်ပြီး ကိုယ်တိုင်ချက်ထားတဲ့ အစားအစာတစ်ချို့ကို အရင်ကျွေးလိုက်အုန်းမယ်။ မျက်စိနဲ့အရင် စားသုံးကြည့်ကြပါအုန်းနော် …
ဆောင်းရာသီမှာ အသီးအရွက် အသားငါးစုံလင်တဲ့ စူကီရာကီခေါ်တဲ့ ဟော့ပေါ့ စားချင်တယ်။
နွေရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကြက်ကြော်နဲ့ ကိုကာကိုလာ စားချင်စိတ်ပေါက်တယ်။
စားကြအုန်းမလား ကြက်ကြော် ….
ပျော်ပွဲစားထွက်တဲ့အခါ ရေညှိထမင်းလိပ် ထည့်သွားပြီး စားရတာ ပျော်စရာကောင်းတယ်။
အလုပ်ပိတ်ရက်မှာ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲချက်စားရင် ကလေးတွေသိပ်ကြိုက်ကြတယ်။
အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ပူပူလေးရမယ် ..
လူကြီးဧည့်သည်လာတဲ့အခါမှာတော့ တရုတ်စတိုင် ဟင်းကောင်းကောင်းလှလှလေးတွေ ချက်ပြီး ဧည့်ခံချင်တယ်။
တစ်ခါတစ်လေ အမွှေးနံ့သာစုံလင်တဲ့ ဒါန်ပေါက်ထမင်းကလဲ တစ်မျိုးဆန်းသစ်တယ်။
သူငယ်ချင်းတွေ စုံတုန်း ရှမ်းခေါက်ဆွဲ လုပ်စားရတာ ပျော်စရာကောင်းတယ် …
ခံတွင်းတွေ့မယ်ထင်တာကို ယူထားလိုက်ကြပြီးရင် အောက်မှာ ဆက်ရေးထားတဲ့ ဒီလဇကာတင်စာရင်းကို ဆက်ကြည့်လိုက်ကြပါစို့ ….
ကျွန်မတို့ မန်းဂဇက်မှာလဲ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အမျိုးမျိုးသော အရသာစုံလင်တဲ့ ပို့စ်များကို ရေးတင်ပေးကြတဲ့ ရွာသူားနဲ့ အားပေးဖတ်ရှုကြတဲ့ ရွာသူားများဖြင့် သုတ ရသ ကဏ္ဍစုံလင်အောင် တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် နှစ်သစ်စတင်တဲ့ ဇန်န၀ါရီလအတွင်းမှာ ပို့စ်အားလုံး ၄၃၇ ပို့စ်ကို စာရေးသူ (၁၀၅ ယောက်) က ရေးသားတင်ပြကြတယ်။ ဝေဖန်အကြံပေးမှုတွေပြုလုပ်ကြရင်း သိပ်ကြိုက်တာပဲလို့ ခံစားရတဲ့ပို့စ်ရှိသလို သိပ်ကောင်းတာပဲလို့ ခံစားရတာလဲရှိတယ်။ ဖတ်ရတာလေးပေမယ့် ဗဟုသုတရလို့ ဖတ်သင့်လို့ ဖတ်ရတာလဲရှိတယ်။ သိပ်ရယ်ရလွန်းလို့ စိတ်ပေါ့ပါးစေတဲ့ ပို့စ်မျိုးလဲရှိတယ်။ အချိန်ညီတပြေးညီတင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ သတင်းဆောင်းပါးများလဲရှိတယ်။ သဘာဝအလှ ဓါတ်ပုံတွေလဲ ကြည့်လို့ရတယ်။ ကဗျာဖတ်ရင်းခံစားချင်လဲရတယ်။ အရသာစုံစုံလင်လင်ထဲမှာမှ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အရသာကို ခံစားနိုင်တဲ့ ဒီမိုရွာကြီးတစ်ခုဖြစ်လို့နေပါတယ်။
မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆု အစီအစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့တာ ၆ လ (၆ ကြိမ်) ဖတ်ရွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးမဟုတ် အကြိုက်ဆုံးကိုသာ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ ရွေးချယ်မှုများကို ကြည့်လျှင် အကြိုက်ချင်းမတူကြတာကို သိသိသာသာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်လအတွက် ဇကာတင်ပို့စ် စုစုပေါင်း ၂၁ ပုဒ် ရွေးချယ်ထားကြပါတယ်။
၁။ အဘဖေါ ရဲ့ ဥရောပသွား ပေါ်တာ တောလား ( ၂၀ )
http://myanmargazette.net/165657/travel (Foreign Resident)
၂။ ကြုံတွေ့နေရ လုပ်ငန်းခွင်ဘ၀ (ခရီးသွားလုပ်ငန်း) – ၁ -၂- ၃
၃။ အမြစ်တူးကာ ထောင်ဖောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ…
၄။ လမ်း၌ယဉ်ကျေးမှု(၁)- Yellow Box
၅။ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု နှင့် ပေါက်တတ်ကရ တောင်တစ်လုံးမြောက်တစ်လုံး
၆။ ဘဲဥ ရဲ့ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း
၇။ ရူးလောက်တဲ့ လှည့်ကွက် ၁၀ခု
၉။ ဘရင်းန် တွေက ပြောတဲ့ အရောင်တို့ အကြောင်း
၁၀။ ဟ = ဟန်ဆောင်တတ်သော အလင်းဆက်တို့သားအမိ
၁၁။ ပင်လယ်မှာဆောင်း ရင်ခွင်မှာနွေ…
၁၂။ “ပလေတိုကြီးရယ် ခင်ဗျား မှန်ပါပေတယ်”
http://myanmargazette.net/161719 (မဟာရာဇာ အံဇာတုံး)
၁၃။ ဧည့်လမ်းညွှန်ဘ၀ဧ။် ကျိုက်ထီးရိုးတစ်ညတာ
၁၄။ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဘားမားအခေါ်
၁၅။ အနက်ရောင်အခန်းတစ်ခုရဲ့ဘ၀ တစ်
http://myanmargazette.net/164848/creative-writing (သော်ဇင် လွိုင်ကော်)
၁၆။ တစ်ခါက တစ်ဘ၀ တစ်မှလေး
၁၇။ လွမ်းမိသော အော်တိုစာအုပ်လေးများ
၁၉။ ငါးဒုက္ခနဲ့ ငါ့ဒုက္ခ
http://myanmargazette.net/165023/creative-writing (ကိုပေါက် မန္တလေး)
ပို့စ် ၂၁ ခု ဖြစ်ပေမယ့် စာရေးသူ (၁၆) ဦး ဇကာတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်ပို့စ်က ပထမရမယ်လို့ ထင်ပါသလဲ?
မှန်အောင်ဖြေနိုင်သူတွေထဲက ပထမဆုံးအဖြေမှန်တဲ့ ၃ ဦးကို ဇူလိုင်လမှာ ကျင်းပမယ့် တွေ့ဆုံပွဲမှာ ဆုလက်ဆောင်တစ်ခုစီ ပေးမယ့် အစီအစဉ်ရှိပါတယ် ….
အဖြေမှန်ကိုတော့ တရုတ်နှစ်ဆန်းတစ်ရက် (၁၀-၂-၂၀၁၃)ရက်နေ့မှာ ဒီပို့စ်မှာပဲ ထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်မယ်နော် ….
2013 ဇန်န၀ါရီလမှာ အကြိုက်ဆုံး အမှတ်အများဆုံး ရရှိသွားသူကတော့ ကြုံတွေ့နေရ လုပ်ငန်းခွင်ဘ၀ (ခရီးသွားလုပ်ငန်း) ကို အပိုင်း ၃ ပိုင်းနှင့် ရေးသားတင်ပြခဲ့တဲ့ လုံးမလေးမွန်မွန် ဖြစ်ပါတယ်ရှင် …..
ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းပါ လုံးမလေးမွန်မွန် ….
ဒီတစ်လ မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆုအတွက် ရွေးချယ်ပေးတဲ့သူတွေ (၉) ဦးရှိခဲ့ပြီး သူတို့တွေအကြိုက်ကို အမှတ်လိုက် စီစဉ်လိုက်တဲ့အခါမှာ အောက်ပါအတိုင်း အဖြေထွက်လာပါတယ် ..
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးမှာ အားလုံးပျော်ပျော်ပါးပါး စားသောက်ရအောင် ကျွန်မကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ မလှမပဖြစ်နေပေမယ့် စေတနာအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ Jiaozi လို့ခေါ်တဲ့ ဖက်ထုတ်တစ်မျိုးကို ကျွေးချင်ပါသေးတယ်။
10 ရက်နေ့ 10 နာရီ အတိ လက်ဆောင်ရဖို့ မှီသေးလား…….ကြယ်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်ခွင့်ပြုပါအဖေ …လို့
အားလုံးဘဲ ခညာ ….
အန်တီဝေ က ဒီနေ့ သိပ် နေမကောင်းဘူး ဖြစ်နေလို့မို့ …
ကျုပ်ကို ကိုယ်စား ဆု ကြေညာဖို့ ပြောပါတယ် ….
ဒါကြောင့်ပဲ … အခု ကွန်မန့် ထဲကနေပြီးတော့ ဆု ကြေညာပေးလိုက်ပါတယ် ….
ကျွဲရောင်း လာဂျကုန်သော လူဂျီးလူဂေါင်း အပေါင်းဒို့ ခညားးး
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ အတွက် မန်းဂဇက် ချစ်သူများ စာပေဆု ကို ရရှိသွားတာကတော့ …..
(ဒိန်း .. တ .. တပ် .. တပ် .. ဒိန်း) ပရိသတ်များ ရင်ခုန်သံ ……..
မဟာရာဇာ အံစာတုံး ရေးသားတဲ့ … “ပလေတိုကြီးရယ် ခင်ဗျား မှန်ပါပေတယ်” …
ဆိုတဲ့ ပို့စ်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ခင်ဗျားးးး
ရွှီးးးး ဗျောင်းးး ဗျောင်းးးး ဗျောင်းးးးးးး
လစဉ် ဇကာတင်နဲ့ မလွဲတဲ့ လုံမလေးရဲ့ post ကောင်းကောင်းလေးများကိုလည်း ရစေချင်ပါကြောင်း—
အကောင်းဆုံးကတော့ ဟီးးး တင်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေပဲ။ စားချင်လိုက်တာနော်။
ဒီနေ့ညကျမှပဲ တင်နိုင်မှာမို့ ခဏလောက် သီးခံပေးကြပါနော် ..
အလည်လွန်နေလို့ ညနေကျမှ အိမ်ပြန်ရောက်မှာမို့လို့ပါ …
မဝေ ပို့(စ) ကို ဝင်လာလိုက်
အစားအသောက်တွေကြည့်လိုက်၊ ဘယ် ပို့(စ) ရွေးရမတုန်း စဉ်းစားလိုက်၊ အစားအသောက်တွေပြန်ကြည့်လိုက်နဲ့ သံသရာ လည်နေတာ။
ဘယ်သူ့ရဲ့ ဘယ်ပို့(စ)တော့ မရွေးတော့ဘူးနော်။
စိတ်ထဲကတော့ ရွေးပြီးပြီ။ မပြောရဲတာ။
ဒီတော့ ဒီ ညမှ ပဲ စောင့်ဖတ်တော့မယ်။
ဟာ ဝေေ၀က မကြေငြာရသေးဘူးလား။
စောစောက အပြင်ရောက်နေတုံး အရမ်းသိချင်လို့ဆိုပြီး တစ်ယောက် ဖုန်းဆက်မေးလို့ သိတာလေး ပြောပြလိုက်မိပြီ။
မနက်ကထဲက တင်ချင်နေတာ အခုမှပဲ တင်နိုင်တော့တယ် …
တတိယ ကိုဂီကိုလဲ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းပါ
သမီး အခုရတဲ့ဆုယူတဲ့အခါ လက်ခုပ်တီး အားပေးအုံးမယ်နော်။
မမွန်ရေ ဂုဏ်ယူပါတယ်ရှင့် မုန့်ကျွေးဖို့ ပြင်နေပြီလား အားနာစရာကြီး
Congratulation ပါနော်။ ဖုန်းဖိုးပြန်ပေးနော်။
နဂါးမမွန်ရေ လှည်းတန်းက ငါးကင်သာအော်ဒါမှာထားပေတော့နော်
အခုထိ ဆုရတဲ့ ထဲမှာတော့ လုံမလေးက အသက်အငယ်ဆုံး ဖြစ်လောက်တယ်။အောင်မိုးသူနဲ့တော့ ဘယ်သူကြီးမယ် မသိဘူး။
ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ပီပြင်တဲ့ စာတွေ ရေးနိုင်တာကို ချီးကျူးပါတယ်။
ရာဇာ ဘပုတော့ ဘရိတ်ဒန့် ကရတော့မလို့ သီသီလေးလိုတော့တယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ယောက်မရွေးခင်အထိ ကိုအောင်ပုက ဗိုလ်စွဲနေတာ…..
မွန်မွန်ကိုလဲ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဂုဏ်ပြုပါကြောင်း…..
လက်မတင်လေး လွဲပြီး ဒုတိယ ရသွားတဲ့ ကိုအောင်ပုကိုလဲ ဂုဏ်ပြုပါကြောင်း…
လူရွှင်တ်ာမော့စ် အင်တာဗျူးမှာ ဒီနှစ် အကယ်ဒမီ မတိုင်ခင် ဟိုးအရင်နှစ်က သူရဖို့ရှိတာ ဆုပေမည့်ညနေမှာ လူမှန်းသူမှန် မသိအောင် မူးနေလို့ စာရင်းပယ်ဖျက်လိုက်ရတယ် ပြောတယ်။ ကပုလည်း ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့၊ ငမူး ဒီလောက် တမ်ဖိုးရှိတဲ့ ဂဇက်စုကို ရာဘာဖိနပ်ပြတ် ဖားပြုတ်ချက်အရက်နဲ့ လဲပစ်ရလား
စောင့်  …စောင့်  စောင့်လိုက်ရတာ ….
ဂုဏ်ပြုပါတယ် လုံမလေးရေ … ကျွေးဖို့သာပြင်တော့ နော ..ဟဲ ဟဲ
ဒါနဲ့ … ဆုမှန်းတဲ့သူတွေထဲမှာ ဦးကျောက်မှန်သနော …. ဦးကျောက် ဆုလက်ဆောင် ထပ်ရပြီပေါ့  ။
ကိုပုကြီး ကိုလည်း ဂုဏ်ပြုပါတယ်ဗျို့  … ဒီလိုအရေးအသားမျိုးက တစ်၇ွာလုံးမှာ သူ့ တစ်ယောက်ဘဲ
ရှိတာမို့ တစ်ကယ့် ကို ထူးခြားမှုပါပဲ ။
ကိုရင်ဂီ ကို လည်း အားကျစိတ်နဲ့အတူ ဂုဏ်ပြုပါတယ် ….။ သူရေးတဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေက
ကျနော်တို့ကို မျက်စိဖွင့် ပေးသလိုပါ ။ မားကက်တင်း ၊ ဒီဇိုင်းနဲ့ အထွေထွေသုတ ….ကျနော်တို့ မလွတ်တမ်း
ူကျကျနန ထိုင်ပြီး မဝေရဲ့ အစားအသောက်တွေ တစ်ဝကြီးသားရေကျပြီး.. နောက်
မတ်မတ် ရပ်ပြီး လုံမလေး ကို အားပါးတရ လက်ခုပ်တီး ဂုဏ်ပြုပါတယ် ။
ကျန်နေတာ တော့ ဘဖောတို့ ဦးဆာမိ တို့ဆီက နှစ်ကူး အန်ပေါင်းတောင်းဖို့ဘဲ …… :harr:
ဒုတိယချိတ်သွားတဲ့ ဆရာကိုအောင်ပုကိုလည်း ဂုဏ်ပြုပါတယ်..
အကြံကုန်တဲ့အဆုံး အိတ်ထဲကဖားတွေကို ထုတ်ရိုက်လိုက်ရတယ် …
အပြောလဲကောင်း အရေးလဲကောင်းတဲ့ ဦးကြီးမိုက် … ဘယ်လိုအိုင်ဒီယာ အလန်းတွေနဲ့ ဆုကြေညာပေးမလဲဆိုတာ နောက်လဆန်းအထိ စောင့်ဖတ်ရင်း အားပေးနေပါကြောင်း …….
မုန့်စားရတော့မယ် ဟေ့… မုန့်စားရတော့မယ်..
တကယ်တော့ တော်တော်လေးပျော်နေပါတယ်… အမှန်အတိုင်းပြောရရင် တွေ့ဆုံပွဲတက်ပြီးတော့ သူများတွေ ဆုယူတာကြည့်ပြီး ဆုလိုချင်စိတ်ကလေး ရှိလာခဲ့ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် မှန်းတော့ မမှန်းခဲ့ပါဘူး.. အရမ်းကြိုက်မိတဲ့ ပို့စ်တွေလည်း ရှိတဲ့အတွက် ကိုယ့်ပို့စ်ကိုလည်း ထင်မထားမိပါဘူး… အခုလိုရတယ်ဆိုတော့ အရမ်းပျော်မိပါတယ်… ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ကြီးကိုရော… အားပေးကြတဲ့ ရွာသူရွာသား သူငယ်ချင်းတွေကိုရော.. ဂုဏ်ပြုပေးကြတဲ့သူတွေကိုပါ တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… အဲဒီပို့စ်ရေးတုန်းကလည်း တကယ်ကို အလုပ်ထဲမှာ စိတ်တွေညစ်ပြီး အလုပ်လုပ်ရတာ အဆင်မပြေလို့ ချရေးခဲ့တာပါ… ရင်ဖွင့်ရင်းနဲ့ ရေးတဲ့ စာလေးကို အားပေးကြတဲ့သူတွေရော.. ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုပါ တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
ပျော်တာနဲ့ ကျေးဇူးတင်တာကလွဲလို့ ဘာမှ ထပ်မပြောတတ်တော့ဝူး..
အမွန်ရေ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူပါကြောင်း ထပ်တူပျော်ရွှင်မိပါကြောင်း
ဘပု နဲ့ ကိုဂီအတွက်လည်း ၀မ်းသာပါကြောင်း
မောင်ရင်မိုဘိုင်းတို့ အချဂဒဲးက ကြိုပြောပါဒယ်ကွယ် လုံမလေးပဲ ရလိမ့်မယ်လို့
ကျုပ်က ဘောလုံးပွဲမှန်းရင်သာ လွဲးတာပါ အခြားဟာမှန်းရင်တော့ အားလုံးသိကြတဲ့
အတိုင်းပါပဲ…. ငှဲ ….. ငှဲ……
အကြိုက်ဆုံးပို့စ်တွေကို ရေးသားဖော်ပြပေးကြတဲ့ ရွာသူားအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …
အကြိုက်ဆုံးနဲ့ ပထမတိုက်ဆိုင်ခဲ့တာက … လူကလေးနဲ့ mobile … မယ်ပု သုံးပုံတစ်ပုံ …
မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ် .. နောက်တစ်ခါလုပ်မယ့် တွေ့ဆုံပွဲမှာ တကယ်လက်ဆောင်ပေးမှာ …
လက်ဆောင်လည်း ရဦးမယ်တဲ့ဟေ့ .. ပိုင်သကွာ..
သူငယ်ချင်း လည်း ဆုရ.. ငါလည်း လက်ဆောင်ရ.. Ah Ha..
ယဉ်ကျေးမှု ပိုစ့်လေးဖတ်ပြီးကတည်းက မဝေးတော့တဲ့ တစ်နေ့မှာ ဆုရလိမ့်မယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းထားခဲ့တာ။ အခုတော့ အဲဒီနေ့ကိုရောက်လာပြီပေါ့။ ချီးကျူး ဂုဏ်ယူပါတယ် လုံးမလေးမွန်မွန်ရေ…။ ကျမတို့လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝကလည်း ဒီပိုစ့်ထဲကလိုပဲ အတူတူပဲမို့ ကြိုက်လည်း ကြိုက်ပါတယ်….။
ကိုရင့်ပို့စ် ဇကာတင်ပါတာတောင် ခုဝင်မှသိရတယ်…
ညောင်းရင် မာဆပ်ပို့ပေးပါ့မယ်.. (ဒိုင်များကို ခေါက်ဆွဲကျွေးချင်သံ… )
နောက်၆လလုပ်မယ့် တွေ့ဆုံပွဲလည်း ပြန်လာနိုင်ဦးမယ်
ဘပု ရော… မီဂီ ကိုပါ ကွန်ကရက်ကျူးလေးရှင်း ပါလို့….
ကျနော် ကတော့ မန်းလေးရောက်နေရလို့ ရွာနဲ့ ဝေးးးးးးးးး
ဗိုက်ဆာအောင်ကျေညာပေးတဲ့ မဝေေ၀ နဲ့ ဆုရသူများ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
စကားအတင်းစပ်—-မဝေေ၀ ဖေါင်ကြီးသင်တန်းအကြောင်းရေးတုံးက ဖေါင်ကြီးဆင်း=….ဆိုပြီးရေးခဲ့ကြတာလေး နဲ့ အခုလောလောဆယ် ဖေါင်ကြီးမှာသင်တန်းတက်နေရတယ်ဆိုတဲ့ မိညီမ တို့ကိုပူးတွဲမြင်မိနေပါကြောင်းးးးးးးး
လုံမလေးမွန်မွန် ယခုကဲ့သို့ ဘ၀တစ်လျောက်လုံး ပျော်ရွှင်ပါစေကြောင်း
လုံမလေးက.. ၁-၂-၃နဲ့.. ဆုကို.. ဆွဲယူသွားတယ်ပေါ့..
ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပဲ စာလုပ်ပြီးရေးလာတာ ပွင့်လင်းလွန်းလို့ လက်နက်ကြီးနဲ့ ထုခံထားရတာ နင့်နေတာပဲ.. ကိုယ့်အကြောင်းမရေးချင်တော့ဘူး.. သူများအကြောင်းတွေပဲ ရေးတော့မယ်
နောက်ကျတဲ့ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းကို လက်ခံပါ။
သတ်ပုံအဖွဲ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ဆုရသူအဖြစ် ဂုဏ်ယူစွာမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။ :hee:
ဝေေ၀ဗားရှင်း ဧည့်ခံကြိုဆိုရေးနဲ့အတူ ဆုကြေညာလိုက်တဲ့ အရသာစုံလင် ဆုပေးပွဲလေးကို လက်ခုပ်တီးအားပေးရင်းးးးး
ကိုယ့်လုပ်ငန်းဘ၀အတွေ့အကြုံ ခါးခါးလေးကို ရေးချင်နေတာ သဂျီးက ငိုချင်ရက်လက်တို့ဖြစ်အောင် လုပ်နေတယ်။
ထပ်တူထပ်မျှ ၀မ်းသာမိပါတယ်ဗျ ။
လုံမလေးအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဆုပေးပွဲကြရင် ကပြရမယ် မုန့် လည်းကျွေးရမယ်နော်။အဲဒီနေ့ က ဆုဘယ်သူရလည်း သိပ်သိချင်လွန်းလို့ရွာထဲက အန်တီကြီး တစ်ယောက်ကို ဖုန်းနဲ့ ဒုတ်ခပေးလိုက်ရသေးသဗျ။
ကွန်ဂရက် ကျူလေး ရှင်း ပါ မွန်မွန်ရေ ၊
ဆုကြေ ညာ တဲ့ နေ့ တည်း က သိပေမယ့် ဒီမှာ ပိတ်ရက်တွေ ဆက်နေလို့ အပြင်ထွက်တာ များနေ တာနဲ့ ဖုန်း နဲ့ ပဲ ခဏ တဖြုတ် ချောင်း ဖြစ် တာ ဆိုတော့ မမန့် ဖြစ်ဖူး ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ကျသွား လို့ ခွင့် လွှတ်ပါ။
ကိုယ်က အလုပ် မလုပ်တော့ သူများတွေ ရေး တဲ့ လုပ်ငန်း ခွင် နောက်ကွယ် က အပျော် အမော လေး တွေ ဖတ် ရတာ သိပ် သဘော ကျမိ တယ်။
အဘနောက်ကျမှ သိရလို့ ခုမှ မန်းရတယ်…ဂုဏ် ယူပါတယ် သမီးရေ နော…
အဲ..တစ်ခုတော့ သတိပေးပါရစေ..သွားတာ လာတာ စားတာ သတိထားနေ ပါနော် ..ဘပု တစ်ယောက်က သမီးကို လူငှားနဲ့ ချောင်းရိုက် ဖို့ ငွေချေပြီးပြီလို့ သတင်းသန့်သန့် ကြားထားတယ်..ဟီဟိ..